Tigidhada tareenka ICE ee jaban iyo Qiimaha Wadooyinka Safarka | Save A tareenka
Tigidhada tareenka ICE ee jaban iyo Qiimaha Wadooyinka Safarka
Guriga > Tigidhada tareenka ICE ee jaban iyo Qiimaha Wadooyinka Safarka
Halkan waxaad ka heli kartaa dhammaan macluumaadka ku saabsan Jarmalka Tigidhada tareenka ICE ee jaban iyo Qiimaha safarka ICE iyo faa iidooyinka.
mawduucyada: 1. ICE by Highlights Tareenka
2. Ku saabsan ICE Tareenka 3. Kor u Qaadka Si Aad U Hesho Tigidhada Tareenka ICE Qiimeeya
4. Immisa tikidhada ICE ah waa immisa? 5. Jidadka Safarka: Maxay ugafiican tahay to raac tareenka ICE, oo aan lagu raacin diyaaradda
6. Maxay ku kala duwan yihiin Heerka Heerka iyo Fasalka Koowaad ee ICE 7. Ma jiraa rukhsad ICE ah?
8. Intee in le'eg ka hor bixitaanka tareenka ICE inuu yimaado 9. Waa maxay jadwalka tareenka ICE
10. Saldhigyadee ayaa u adeegta ICE 11. Tareenada ICE Weydii Su'aalo
ICE by Highlights Tareenka
Tareenka ugu dhaqsiyaha badan Jarmalka waa tareenka ICE xawaare dhan 300km / saacaddii.
Twuxuu caan ku yahay tareenka ICE ee nidaamka tareenka Jarmalka wuxuu isku xiraa magaalo kasta oo Jarmalka ka mid ah.
Dhammaan tareenada dul socda Nidaamka tareenka Jarmalka, ICE waxay ka tirsan tahay Nooca A.
Tareenada ICE waxaa loogu talagalay inay la tartamaan diyaaradaha marka la eego raaxada iyo waqtiga la tagayo.
Waddooyinka caalamiga ah ee ICE waxaa ka mid ah Faransiiska, Belgium, Denmark, Awstariya, Holland, iyo Switzerland.
Ku saabsan ICE Tareenka
Intercity-Express ama magaca toobiye ICE waa nidaam ka mid ah tareenada-xawaaraha sare oo ay leedahay shirkadda Deutsche Bahn, Bixiyaha tareenka ee Jarmalka. The Tareenka ICE caan ku yihiin raaxo, xawaare, iyo raaxo maadaama ay isku xirayaan magaalo walba oo ku taal Jarmalka.
Iyadoo xawaareheedu yahay 300km saacaddii, ku safrid tareenka ICE waa habka ugu dhakhsaha badan ee loogu safro magaalooyinka fog sida Cologne iyo Hamburg.
Wadooyinka Safarka ee ICE kuma koobna oo keliya Jarmalka. Tareenka wuxuu maraa waddooyinka caalamiga ee aada Austria, Faransiiska, Belgium, Switzerland, Denmark, iyo Nederland.
Tag Kaydi Bogaga Tareenka ama u isticmaal aaladdaa 'widget' si aad u raadiso tareenka tikidhada tareenada Ice
Kor u Qaadka Si Aad U Hesho Tigidhada Tareenka ICE Qiimeeya
Tirada 1: Ballanso tigidhadaaga ICE intaad awoodid
Hadaad jeceshahay inaad hesho tikidhada ICE jaban, marka hore waad iibsaneysaa, waxay sii kordheysaa fursadahaaga inaad si jaban ku hesho. Waxaa jira 3 noocyada qiimaha jaban ee ICE iyo dhammaan saddexda nooc ee tikidhada ayaa laga heli karaa waqtiga iibinta bilowga ah, laakiin keydka ayaa la raacayaa, Qiimaha keydinta, iyo Super sparpreis waxaa laga yaabaa inaan la heli karin maadaama maalinta bixitaanka ay soo dhowaaneyso. Waad u dalban kartaa tikidhada tikidhada safarka sida ugu dhakhsaha badan 6 bilo kahor bixitaanka.
Tirada 2: Dalbo tigidhadaada tababarka ee ICE markaad hubto safarkaaga
Hubinta safarkaaga iyo taariikhda bixitaankaaga waxay kuu badbaadin doontaa lacag khidmad soo celin ah. Qadarka lacag celinta iyo ikhtiyaarka soo celinta tikidhada ICE ee aan la isticmaalin waxay kuxirantahay nooca tikidhka aad iibsato. Sidoo kale, lacagta soo celinta ayaa ka hooseysa tikidhada safarka ee badbaadinta marka loo eego tikidhada caadiga ee tikidhada. Ogsoonow in DB aysan ku soo celin doonin lacag ahaan markaad tigidhkaaga soo celiso. Soo celinta DB waxaa lagu sameeyaa foojarrada DB, taas oo aad ku isticmaali karto si aad ugu bixiso adeeg kasta oo ay bixiyaan. Waxaad sidoo kale iibin kartaa kanaga Tikidhada tareenka ee ICE khadka tooska ah ee internetka haddii aad rabto inaad lacagta soo ceshato.
Tirada 3: Safarka tareenka ICE inta lagu jiro xilliyada ugu sarreysa
Tigidhada ICE waa ka raqiisan yihiin xilliyada ugu sarreeya (Talaado, Arbacada, Khamiista, iyo Sabtida). Inta lagu jiro maalmaha ugu sarreeya, tikidhada jaban ayaa si dhakhso leh loo iibiyaa, oo ka tagaya kaliya tikidhada Flexpreis. Si aad ugu safarto maalmaha Peak, horay u sii qabso buug si aad u hesho tigidhada safarka. Haddii aadan heli karin tikidhada safarka kaydka, iska hubi inaad safartid inta u dhaxaysa subaxa hore iyo galabtii (sababta oo ah safarro ganacsi awgeed) maadaama tikidhada Flexpreis ay ka jaban yihiin markaa. Ugu dambayn, iska ilaali safarka dadweynaha iyo fasaxyada iskuulka maadaama qiimaha tikidhada 'ICE' ay sidoo kale kordhin doonaan.
Tirada 4: Iibso tikidhadaada ICE wadada Save A Train
Waxaad ka heli doontaa bixinta ugu fiican ee tikidhada tareenka ee ICE ee Yurub websaydhkeena, Save A tareenka. Waxaan leenahay bixinnada ugu badan ee tikidhada tareenka ee Yurub iyo adduunka. Iyada oo ku xiran xiriirkeena tiro badan oo ka shaqeeya tareenka iyo algorithms sax ah, waxaan kuu soo bandhigaynaa tikidhada ICE ugu raqiisan ee aad waligaa ka heli karto. Sidoo kale, waxaan u helnaa badal rakhiis oo tareenka aan ahayn ICE.
Immisa tikidhada ICE ah waa immisa??
Qiimaha tigidhada ICE-da ayaa kuxiran nooca tigidhada iyo heerka kuraasta aad rabto. Guud ahaan, tareenka Jarmal caan ku yahay qiimaha tikidhada 'ICE' hooseeya. Waxaa jira seddex nooc oo tikit ah oo loogu talagalay tareenka ICE - tigidhka caadiga ah ama Flexpreis, tikidhada tikidhada Supersaver ama Supersparpreis, iyo kharashka keydka ama tikidhada 'Sparpreis ICE'. Tigidhada safarka ee badbaadada ayaa ka jaban tikidhada caadiga ah, laakiin tigidhada la heli karo ayaa yaraanaya iyadoo maalinta bixitaanku soo dhow yahay. Qiimaha tigidhada ICE ku tiirsanaanta fasalka aad doorato oo halkan waxaa ku yaal miis la soo koobey oo ah qiimaha celceliska fasal kasta:
Jaangooyo 17 € – 50 € 30 € – 120 €
Ganacsiga 40 € – 87 € 80 € – 180 €
Jidadka Safarka: Maxay ugu fiicantahay qaadashada tareenka ICE, oo aan lagu raacin diyaaradda?
1) Ka fogow Nidaamyada Horey-u-degidda. Hadaad duulimaad ku hayso 9 waxaan ahay, waxaad ka fiicantahay joogitaanka garoonka diyaaradaha ugu yaraan 7 sidaa darteed waqtiga ay tahay inaad soo martay Nidaamyada Gudbinta Hore iyo hubinta amniga, waxay kugu dhowdahay inaad waqtigaaga diyaaradda raacdid.
Tareenada ICE, waad imaan kartaa wakhti kasta ka hor intaadan dhoofin illaa iyo intaad tareenka ku soo dejiso ka hor intaadan guurin. Tani waa macquul sababtoo ah ma jiraan habraacyo horay loo sii dejiyey ama hubin nabadgelyo oo dheer. Kaliya i tus rugta, hel tareenkaaga tilmaamaha, iyo guddiga!
Wadarta waqtiga safarka, ICE waxay ka guuleysataa diyaaradaha Jarmalka sida ay iyadana ugu sameyso qiime ahaan. Ka-soo-qaybgal waqtigii lagu lumiyey nidaamka Ho-u-socodka, diyaaradaha ayaa sii lumiya guud ahaan waqtiga safarka socdaalka (laga bilaabo garoonka diyaaradaha ilaa meesha saxda ah).
2) Khidmadaha Boorsada. Waxaad hubsan kartaa inaad bixinayso lacag dheeraad ah boorsooyinka haddii aad ku safraysid diyaarad. Si kastaba ha ahaatee, Haddii aad ku safarto Tareennada ICE ee bixinaya khidmadaha rarka waa kharash dheeraad ah oo aadan sameyn doonin haddii aad iibsato tikidhada tareenka jaban ee ICE. Si loo cadeeyo, la Qiimaha ICE raqiis ah, Khasab kuguma aha inaad ku bixiso boorso kasta oo aad raacdo. Taasi waxay ICE ka dhigaysaa mid ka raqiisan oo ikhtiyaarka safarka wanaagsan.
3) Tareenadu waa kuwa deegaanka u fiican. The Tareenka ICE sidoo kale waa deegaanka u roon ka badan diyaaradaha, taas oo ka qayb qaadata wasakhaynta hawada. Ku safridda tareenka waa × ka yar tahay wasakheynta kaarboonka hawada ka siixeysa safarka hawada.
Maxay ku kala duwan yihiin Heerka Heerka iyo Fasalka Koowaad ee ICE?
Si ka duwan tareenada kale ee wata tigidhada qaybaha kala duwan (heerka, ganacsiga, fulinta, iwm) sida Trenitalia, ICE-da Jarmalka way ka yara duwan tahay. Waxaa jira laba fasal oo tareen kasta oo ICE ah - fasalka koowaad iyo fasalka labaad. Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya labada qayboodba waa qiimaha, dabacsanaan, iyo adeegyada la bixiyo.
Iyada oo ay khusayso tigidhada iyo qaybaha fasalka ee tareenka ICE, nooc kasta oo tigidh ah wuxuu ku jiri karaa fasalka koowaad. Tan macnaheedu waa xitaa tikidhada tareenka jaban ee ICE, qiimaha badbaadada, iyo Super sparpreis waxay awoodaan kuraasta heerka koowaad. Si kastaba ha ahaatee, Qiimaha wuu kala duwan yahay labada fasalba, sida kor lagu soo arkay.
Tigidhada Heerka Koowaad ICE:
Heerka koowaad ee ICE wuxuu dejiyaa heerka raaxada, raaxada, iyo adeegga ugu fiican nidaamka tareenka Jarmalka. Waxaa loogu talagalay inay la dagaallamaan diyaaradaha dagaalka, Tareenada ICE waxay ku siinayaan raaxo safarada dhaadheer. Intaa waxaa dheer, Qaybaha fasalka koowaad waxay ka kooban yihiin saddex meelood meel ka mid ah tareenka waxayna noqon karaan ugu badnaan saddex qaybood iyadoo kuxiran tareenka ICE ee la qaatay.
Kuraasyada qolka-fasalka koowaad waa ka weyn yihiin oo loo habeeyey si ka duwan a 2-1 diyaarin halkii la a 2-2 fasalka labaad. Tanina waxay u fasaxaysaa rakaabka meel bannaan oo badan. Waxaa intaa dheer, kuraasta fasalka koowaad ee ICE sidoo kale waxaa lagu daboolay maqaar faux ah waana ka weyn yihiin kuwa ku jira fasalka labaad. Maaddaama ganacsatadu caadi ahaan isticmaalaan fasalka koowaad, waxaa jira miisas adag oo loo heli karo rakaabka doonaya inay xoogaa shaqo ah qabtaan inta ay safarka ku jiraan.
Adeegyada dheeraadka ah ee kala saara fasalka koowaad iyo fasalka labaad ee tareenada ICE waxaa ka mid ah bilaash, wargeysyada maalinlaha ah, bilaash ah WI-FI, iyo cod-bixiyeyaasha gaarka ah si looga hortago carqaladeynta soo dhaweynta taleefanka gacantu. Rakaabka Fasalka Koowaad sidoo kale waxay ka dalban karaan cuntooyinkooda kuraasta haddii aysan rabin inay aadaan makhaayada saaran tareenka.
Faa'iido kale oo ku xaddidan safarada heerka koowaad ee ICE waa Boos kursiga. Dhamaan tigidhada fasalka koowaad, oo ay ku jiraan tikidhada ICE jaban, ku raaxayso faa'iidadan. Uma baahnid inaad ka walwasho inaad si aan kala sooc lahayn u hesho kursiga daaqadda; waad dooran kartaa kursiga aad rabtid inta aad ballansaneyso oo aad sii haysatid.
Tigidhada Heerka Labaad ee ICE:
Qeybaha Fasalka Labaad kama fog fog Fasalka Koowaad si raaxo leh. Intaa waxaa dheer, kuraasta qeybta labaad waxay ka fiican yihiin celceliska kuraasta diyaaradaha. Dheeraad ah, iyagu waa ergonomic, la imow madax xiiran, waxayna ku daboolan yihiin maro wanaagsan. Tani waxay ka dhigeysaa safar masaafo dheer oo raaxo leh.
Waxaa jira qaybo badan oo fasalka labaad ah oo ICE tareen ah marka loo eego kuwa Fasalka Koowaad. gaar ahaan, habeynta fadhiga ee fasalka labaad way ka yara adag tahay ta fasalka koowaad. Saf walba waxaa jira afar kursi (2-2 qabanqaabada kursiga), iyadoo labada kursiba ay wadaagaan gacanta dhexe.
dheeraad ah, Rakaabka kujira fasalka labaad waxay marin uhelaan qaar kamid ah adeegyada fasalka koowaad laakiin leh xad. Qaado WI-FI tusaale ahaan. Fasalka labaad, Wi-Fi ma aha mid aan xadidnayn sida loogu talagalay rakaabka fasalka koowaad. Rakaabka heerka labaad sidoo kale ma helaan wargeysyo maalinle ah oo lacag la’aan ah sidaa darteed haddii aad jeceshahay inaad ka hesho wargeys fasalka labaad, waa inaad mid iibsato.
Rakaabka heerka labaad waa inay aadaan makhaayada haddii ay rabaan inay dalbadaan cunto. Kama dalban karaan kuraastooda maaddaama ay ku jirto qaybta fasalka koowaad ee ICE. Sidoo kale, Tigidhada ICE ee tikidhada heerka labaad ee labada Flexpreis iyo kuwa kaydiya labadaba si otomaatig ah uma daboolaan boos celinta boosaska. Hadaad jeceshahay inaad kursi dhigatid fasalka labaad, waa inaad bixisaa lacag dheeraad ah oo ah € 6. Sidoo kale Rakaabka Fasalka Koowaad iyo Labaadba waxay leeyihiin koronto kursi kasta oo ay dhigtaan.
Ma jiraa diiwaangelin ICE ahta ah?
ICE waxay bixisaa kaararka tareenka at qiime jaban ICE safarka aan xadidneyn ee guud ahaan Jarmalka ama Yurub. Waxaa jira saddex nooc oo kaararka tareenka ah:
Tareenka Waddada Jarmalka
Kaarka tareenka ee Jarmalka waa socdaal aan xadidneyn oo gudaha Jarmalka ah. Sidoo kale, waxaa loogu talagalay dadka safarka ah ee aan ku noolayn Yurub, Turkiga, iyo Ruushka. Faa’iidooyin yar oo laga helo Jidka Tareenka Jarmalka waxaa ka mid ah:
Kuwa sita kaarka tareenka waxay booqan karaan goobo gaar ah oo gunno ah oo ka baxsan Jarmalka (Salzburg, Venice, iyo Brussels)
Qiimo jaban tikidhada ICE ee qofkasta oo kayar 28 sano
Socdaal aan xadidneyn oo ku baahsan Jarmalka oo dhan
Laba qof ayaa badbaadin kara lacag badan adoo adeegsanaya Mataanaha loo yaqaan 'Twin Pas' markay safrayaan
Dabacsanaan ayaa u oggolaanaysa dadka haysta baasaka tareenka Jarmalka inay u safraan meel kasta waqti kasta
Haystayaasha baasaboorada Jarmalka ayaa laga dooran karaa 3 si ay u 15 maalmo safar oo isku xigta bil gudaheed markii aad iibsaneyso kaarka.
Kaarka Eurail wuxuu u oggolaanayaa dadka aan reer Yurub ahayn ee ku nool dibedda Ruushka, Yurub, iyo Turkiga inay u safraan Yurub oo aan xadidnayn. Qaar ka mid ah faa'iidooyinka waxaa ka mid ah:
Foojarrada iyo qiima dhimista meelaha loo dalxiis tago.
Noocyo kala duwan oo laga dooran karo - Adult, Sare, iyo Dhalinyarada.
Socdaal aan xadidneyn ayaa dhex mara 31 dal oo Yurub ah, oo ay ku jiraan Turkiga.
PassR-ga InterRail wuxuu siiyaa dadka ku nool Ruushka, Turkiga, ama safar aan xadidneyn oo Yurub oo dhan ah. Joogtada ah ee kaararkaan waxaa ku jira:
Qiimo dhimis Tikidhada tareenka ee ICE dadka da'da yar iyo kuwa waaweynba.
U safrin aan xadidnayn 33 waddamada Yurub
Waddo tareen oo bilaash ah ayaa loogu tala galay dadka sita Pass kuwaas oo la socda ilaa labo carruur kayar 11 sano.
Waqtiga safarka ee 3 maalmood si 3 bishiiba qofkiiba.
Kaar walba waa la heli karaa waana in lagu dhaqaaqo gudahiisa 11 bilood ee wax iibsiga.
Intee in le'eg ka hor bixitaanka tareenka ICE inuu yimaado?
Si loo hubiyo inaad ku timaado waqtigii aad fuulaysid, xasil, iyo xitaa ka baadi dukaamada, waxaa lagugula talinayaa inaad ugu yaraan timaadid 30 daqiiqado ka hor waqtiga bixitaankaaga.
Waa maxay jadwalka tareenka ICE?
Jadwalka tareenka ayaan la hagaajin, taas oo adkeyneysa in jawaab laga bixiyo. Si kastaba ha ahaatee, waxaad ka heli kartaa jadwalka tababarka ICE-waqtiga dhabta ah ee bogga A Save A Train. Geliso asalkaaga iyo halkaad u socoto isla markaana hel marin deg deg ah dhammaan jadwalada tareenka ICE. Tareenka ugu horreeya ee ICE ayaa tagaya 6 waxaan ahay, iyadoo tareenadu mid walba tagayaan 30 daqiiqado u taga meelaha waaweyn.
Saldhigyadee ayaa u adeegta ICE?
Wadooyinka caalamiga ah ee ICE waxay ka baxaan dhowr xarumood oo caalami ah, waxaa ka mid ah Brussels Midi South (Brussels Midi South Station oo ku taal Ingiriis), Bartamaha Arnhem, iyo Amsterdam Central, iyo qaar badan oo.
Imaatinka, Tareenka ICE kaalay 11 Saldhigyada Jarmalka iyo hal xarun oo Switzerland ah. Sidoo kale, saldhigyada waaweyn ee laga yimaado waxaa ka mid ah Oberhausen, Duisburg, Dusseldorf, Kologne, Madaarka Frankfurt (Madaarka Weyn ee Frankfurt), Manheim, Siegburg, iyo kuwa kale.
dheeraad ah, Dusseldorf waa magaalo qurux badan oo ku teedsan Rhine lehna taariikh dhaqameed hodan ah iyo dareen. Waxaa jira soojiidasho badan oo dhaqameed iyo taariikhi ah oo caan ah oo la arko iyo wadooyinka muuqaal dabiici ah socodka iyo goob dukaameysi weyn. Waa goob ku habboon a sabtida iyo axada asxaabta ama qoyska.
Laga soo bilaabo Amsterdam Central (Centraal wuxuu ku yaal Dutch wuxuuna macnaheedu yahay Saldhigga Dhexe), waad imaan kartaa Frankfurt, magaalada loo yaqaan caasimada dhaqaalaha ee Yurub. Waa maxay more, waxaa jira xeebaha quruxda badan, matxafyada, iyo maqaayadaha ay booqdaan.
Cologne waa xarunta fanka, naqshadaha, iyo taariikhda hodanka ah. Tareenka ICE ee Amsterdam Centraal, waad imaan kartaa Cologne si aad naftaada uga quusato quruxda magaaladan.
Dhab ahaantii, waxaa jira jardiinooyin botanic qurux badan oo aad u qurux badan, makhaayadaha leh noocyo baaxad weyn oo madax-dhaqameed ah, xanaanada xoolaha, matxafyada, iyo baararka si ay ugu raaxaystaan. Sidoo kale, hadaadan hubin rugta aad dooranayso, algorithmkeena ayaa kaa caawin doona inaad doorato.
Tareenada ICE Weydii Su'aalo
Maxaan ila soo qaataa ICE?
Marka laga reebo naftaada? Soo qaado dukumintigaaga safarka, Baasaboor ansax ah, iyo caymiska safarku qasab ma aha laakiin dokumentigan ayaa u fiican caafimaadkaaga.
Shirkadda ay leedahay ICE?
Magaalada-Express (Barafka) waxaa iska leh bixiyaha tareenka qaranka ee Jarmalka, Deutsche Bahn, iyo DB waxaa iskaleh Dowlada Federalka Jarmalka.
Xagee la aadi karaa ICE?
ICE ugu horreyn waxay dhex martaa dhammaan magaalooyinka Jarmalka. Waxaa jira qaar caalami ah Wadooyinka safarka ee ICE wadamada qaar xuduudu Jarmalka.
Maxay yihiin howlaha loo raaco tareenada ICE?
Ma jiraan qaab socod raacsan oo xiisaha leh. Markii aad timaadid xarunta, hubi boodhadhka tilmaamaha si aad u hesho tareenkaaga. Intaa waxaa dheer, ka dib waad raaci kartaa tareenka wakhti kasta ka hor inta aan loo qorsheyn inuu baxo.
Waa maxay adeegyada ku jira tareenka ICE?
Tareenka ICE wuxuu ku bixiyaa cuntada transit-ka halkaasoo menu-ku ka kooban yahay cunno, cunto fudud, iyo sharaabka nooc kasta. Intaas waxaa sii dheer, waxaa ku yaal dekedo lacag bixiya oo kursi kasta ku xiga, WiFi bilaash ah (aan xadidneyn Fasalka Koowaad), iyo qeylo-dhaannada loogu talagalay soo dhaweynta taleefanka gacmeed aan kala joogsanayn (kaliya fasalka koowaad).
Su'aalaha Badanaa la I weydiiyay – Miyay tahay inaan horay u sii qabsado kursi ICE ah??
Uma baahnid inaad horay u sii qabsato kursi, laakiin waad samaysan kartaa boos celin booska haddii aad rabto. Hadaad iibsato tigidh-fasalka koowaad, si otomaatig ah ayaad xaq ugu leedahay kursi bilaash ah.
Ma ku jiraan Wiish internet-ka ICE dhexdeeda ah?
Haa, waxaa jira. Qolka fasalka labaad, Internetka WI-FI waa bilaash laakiin ma xadidna sida ay ku jirto Fasalka Koowaad.
Ugu dambeyntii, Hadaad intaas gaadhay, waad ogtahay waxkasta oo aad ubaahantahay inaad ka ogaatid tareenada ICE waxaadna diyaar u tahay inaad iibsato tigidhkaaga tareenka ee ICE-da SaveATrain.com.
Ma rabtaa inaad boggaan ku dhigto bartaada? Riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-ice%2F%0A%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah), Ama si toos ah ayaad ugu xidhiidhi kartaa boggan.